MATIU 13 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAT 13)
O ji ilu gwa ha ọtụtụ ihe. Ọ gwara ha sị, “O nwere otu onye ọrụ ubi gara ịgha mkpụrụ nꞌubi ya.
Mgbe ọ na-agha mkpụrụ ndị a, ụfọdụ nꞌime ha dara nꞌakụkụ ụzọ ebe ụmụ nnụnụ bịara tụrụ ha loo.
Mkpụrụ ụfọdụ danyere nꞌala ebe ogwu ogwu dị. Mgbe ha topụtara, ogwu ahụ kpagburu ha.
Emesịa, ndị na-eso ụzọ Jisọs bịakwutere ya jụọ ya sị, “Gịnị mere i ji na-agwa ndị a okwu nꞌilu?”
“Nꞌihi na onye ahụ nwere ihe ka a ga-enyekwa ọzọ, ka o nweta hie nne. Ma onye na-enweghị ihe ọ bụla ka a ga-anapụ ọ bụladị ihe o nwere.
Nꞌihi na ọ bụ eziokwu ka m na-ekwu mgbe m na-agwa unu sị, ọtụtụ ndị amụma na ndị ezi omume ka ọ gụrụ agụụ ịhụ ihe ndị a anya unu na-ahụ ugbu a, na ịnụ ihe ndị a ntị unu na-anụ, ma ha enweghị ike.
“Ugbu a geenụ ntị mgbe m na-akọwara unu ihe banyere ilu onye ọrụ ubi ahụ nke gara ghaa mkpụrụ nꞌubi ya.
Jisọs tụrụ ilu ọzọ sị, “Alaeze eluigwe dị ka onye ọrụ ubi nke kụrụ ezi mkpụrụ ọka nꞌubi ya.
Ma nꞌotu abalị, mgbe onye ọrụ ubi ahụ nọ nꞌụra, onye iro ya gara nꞌubi ahụ kụọ mkpụrụ na-epu ahịhịa nꞌetiti ezi mkpụrụ ọka ahụ ọ kụrụ.
Mgbe mkpụrụ ọka ndị ahụ bidoro ito, ahịhịa ahụ bidokwara ito.
“Ma ndị na-ejere onye ọrụ ubi ahụ ozi bịara jụọ ya ajụjụ sị, ‘Nna anyị ukwu, ọ̀ bụghị ezi mkpụrụ ọka ka ị kụrụ? Ebeekwanụ ka ahịhịa ndị a si bịa?’
“Onye ọrụ ubi ahụ zara ha sị, ‘Ọ bụ onye iro m kụrụ ahịhịa ndị a.’ Ndị na-ejere ya ozi sịrị, ‘Ka anyị gaanụ fopụtasịa ha.’
“Ma onye ọrụ ubi ahụ sịrị ha, ‘Ọ dịghị! nꞌihi na mgbe unu na-achọ ifopụ ahịhịa ndị ahụ, unu nwere ike site nꞌamaghị ama fopụ ezi mkpụrụ.
Jisọs tukwara ilu ọzọ sị ha, “Alaeze eluigwe dị ka mkpụrụ mọsụtadị nke onye ọrụ ubi kụrụ nꞌubi ya. Ọ bụ ezie ha ọ bụ mkpụrụ dịkarịsịrị nta karịa mkpụrụ ubi nile, ọ dị nta dị ka mkpụrụ aṅara
ma mgbe mkpụrụ a toro, ọ na-adị ukwuu karịa ihe nile a kụrụ nꞌubi. Ọ na-aghọ osisi buru ibu, nke ụmụ nnụnụ na-arụ akwụ ha nꞌalaka ya.”
Ọzọ kwa, Jisọs ji alaeze eluigwe tụnyere ihe na-eko achịcha nke nwanyị na-ewere gwakọtaa nꞌụtụ ọka e ji eme beredi, tutuu ruo mgbe ihe iko achịcha ahụ mere ka ụtụ ọka ahụ koo.
O mere nke a ka okwu ndị amụma kwuru mezuo, nꞌihi na ha buru amụma sị, “Aga m eji ilu kwuo okwu mgbe m na-agwa ha okwu. Aga m agwakwa ha ihe mmadụ ọ bụla na-amaghị site nꞌoge e kere ụwa.”
Emesịa, Jisọs hapụrụ igwe mmadụ ahụ nꞌezi baa nꞌụlọ. Ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya sị ya, “Kọwaara anyị ihe ilu ahụ ị tụrụ pụtara, ilu banyere ahịhịa puru nꞌubi a kụrụ ọka.”
Jisọs zara ha sị, “Ọ dị mma. Lee ihe nkọwa ya bụ: nwoke ahụ kụrụ mkpụrụ ahụ bụ mụ onwe m.
Onye iro ahụ gara kụọ mkpụrụ puru ahịhịa bụ ekwensu. Owuwe ihe ubi nọchiri anya ọgwụgwụ oge. Ndị owuwe ihe ubi bụkwa ndị mmụọ ozi.
“Dị ka e siri fopụtasịa ahịhịa ahụ kpọọ ha ọkụ, otu a ka ọ ga-adị mgbe ụwa ga-agwụ.
Ma ndị nile bụ ụmụ Chineke ga-enwụ dị ka anyanwụ nꞌime alaeze Nna ha. Ndị nwere ntị ịnụ ihe ha nụrụ.
“Ọzọ, alaeze eluigwe yiri nkume dị oke ọnụ ahịa nke onye na-azụ ahịa chọtara.
Mgbe ọ hụrụ nkume a, o rere ihe nile o nwere, were ego ya gaa zụrụ nkume a dị oke ọnụ ahịa.
“Ọzọ kwa, alaeze eluigwe dị ka ụgbụ e ji egbu azụ, nke onye ọkụ azụ wụnyere nꞌime mmiri, jiri ya jide azụ dị iche iche, ndị a na-eri eri na ndị a na-adịghị eri eri.
Unu ghọtara ihe ndị a m na-ekwu?” Ha azara sị ya, “Ee, anyị ghọtara.”
Jisọs sịrị ha, “Ya mere, onye ozizi iwu Mosisi ọ bụla soro bụrụ onye na-eso ụzọ nke alaeze eluigwe, ga-adị ka onyenwe ụlọ nke na-esite nꞌọba ya na-ewepụta ihe ọhụrụ na ihe ochie.”
“Nwoke a ọ̀ bụghị nwa Josef, onye ọkwa nka? Ọ̀ bụghị Meri bụ nne ya? Jemes, na Josef, na Saịmọn, na Judas, ha abụghị ụmụnne ya?
Ọ̀ bụ na anyị amakwaghị ụmụnne ya ndị nwanyị, ndị anyị na ha bi nꞌebe a? Ebee ka o si nweta oke amamihe dị otu a?”
Ya mere, ọ rụghị ọtụtụ ọrụ ebube nꞌebe ahụ, nꞌihi na ha enweghị okwukwe nꞌime ya.